Mogadishu Journal » Xidigan katirsan Bayern Munchen oo rajo galiyay Man United, Sidee ?
James Rodriguez ayaa lagu soo warramayaa in uusan ku faraxsaneen sii joogista Bayern Munchen.
Warsidaha laga aqristo Germany ee Kicker ayaa baahiyay in xidigan heerka caalami ee reer Colombia uusan ku faraxsaneen Bayern, walow uu dadka hortooda kasheegay in uu ku faraxanyahay Munich.
Bayern ayaa 27-jirkan kala soo saxiixatay Real Madrid iyaga oo kusoo qaatay 2-sano ah inkasta oo ay heshiiskisa ay 42-million oo Euro mid joogta ah ay uga dhigi karaan xilli ciyaareedka soo aaddan.
Mar uu hadlayay bishii May James ayaa caddeeyay sida uu ugu faraxsanyahay Bavaria.
“Waan wanaagsanahay, waxa aan rajaynayaa in halkaan sii joogo, xaqiiqdi waxaan dareemayaa wanaag, horyaalka garmalku waa mid wanaagsan” ayuu u sheegay Sport.
Manchester United iyo Liverpool ayaa sidoo kale xagaagan lala xiriirinayay James, iayada oo El Gol Digital ay baahisay in uu ka xanaaqay kadib markii ay Madrid ay isku dayday in ay ku qasabto in uu kubiiro Manchester United.